ပြဿနာများဖြစ်ပေါ်စေပုံမှန်မဟုတ်သောတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေနည်းစနစ်? (စိတ်ထိခိုက်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ Syndrome) - Porn တွင်သင့်ဦးနှောက်
ပုံမှန်မဟုတ်သောဒါမှမဟုတ်ပြင်းထန်တဲ့တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေနည်းစနစ် copulatory erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုအထောက်အကူပြုနိုင်ပါတယ်။ ပုံမှန်လိင်ဆက်ဆံမှုဖိအား (သေခြင်းတရားချုပ်ကိုင်ထား) နှင့်အများအပြား desensitized လူအလုပ်မြန်နှုန်း (အလွန်အစာရှောင်ခြင်းလှုပ်ရှားမှုများကို) မကိုက်ညီနိုင်ပါတယ်။ အစာအိမ် (ကျရောက်နေတဲ့) ရက်နေ့တွင် Masturbating ပုံမှန်လိင်ဆက်ဆံမှုမှ sensitivity ကိုလျှော့ချ၏စည်းကမ်းချက်များ၌တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ၏အများဆုံးဒုက္ခပုံစံများကိုတစ်ဦးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဒီ website www.healthystrokes.com ယောက်ျားများသည် ၄ ​​င်းတို့ကို“ စိတ်ထိခိုက်သည့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းရောဂါ” ဟုခေါ်သည့်ကျောရိုးတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းမှသက်သာစေရန်ကူညီပေးသည်။ အောက်ပါမကြာခဏမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများသည် healthstrokes.com မှဖြစ်သည်။
စိတ်ထိခိုက် Masturbatory Syndrome ဆိုတာဘာလဲ? စိတ်ထိခိုက် Masturbatory Syndrome (TMS) အချို့သောယောက်ျားတစ်ဦးမျက်နှာ-Down (ကျရောက်နေတဲ့) အနေအထားတွင် masturbating ၏ရှိသည်အလေ့အထဖြစ်ပါတယ်။ တချို့က TMS ယောဂီဟာမွေ့ရာ, ခေါင်းအုံး, သို့မဟုတ်အခြားအိပ်ယာ, ဒါမှမဟုတ်ကြမ်းပြင်တဘက်၌သူတို့ penises ပွတ်ပေးပါ။ တချို့က TMS ယောဂီဟာသူတို့ရဲ့လက်သို့သူတို့ရဲ့အစာအိမ်နဲ့တွန်းကန်အားအပေါ်နှင့်အိပ်ကြ၏။
ဒီဖက်ရှင်မှာတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတာမှားနေသလား။ မျက်နှာချ Masturbating လိင်တံပေါ်နှင့်အထူးသဖြင့်လိင်တံ၏အခြေစိုက်စခန်းအပေါ်အလွန်အကျွံဖိအားကိုထည့်လေ့မရှိ။ ဤရွေ့ကားအာရုံကိုအလွယ်တကူသမားရိုးကျတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေဒါမှမဟုတ်လိင်ဆက်ဆံမှုပုံတူမဖြစ်တော့ဘူးကြသည်မဟုတ်။ ဒါကပုံမှန်လိင်ဆက်ဆံခြင်းရှိသည်ဖို့ TMS ယောဂီနိုင်ခြင်းကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒီက web site ကိုကောက်ယူတစ်ဦးကစစ်တမ်းသမားရိုးကျ masturbate သူကိုအထီးထက်ပိုမကြာခဏ TMS ယောဂီထက်လိင် 6.6 ကြိမ်ရှိသည်ဖော်ပြခဲ့တယ်။
စကားမစပ်, healthstrokes.com သင်အလေ့အထအသစ်နှင့်အတူပြန်လည်လေ့ကျင့်ခြင်းမပြုမီတစ်ပါတ်သာကျရောက်နေတဲ့တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုရပ်တန့်ဖို့လုံလောက်တဲ့ရှည်လျားလိမ့်မည်ဟုအကြံပြုထားသည်။ ထိုသို့သောအကြံဥာဏ်သည်ညစ်ညမ်းမှုကိုမသုံးသောသူအတွက်အဆင်ပြေပါသည်။ သူတို့ရဲ့ ဦး နှောက်ကို reboot လုပ်ဖို့ပိုလိုအပ်တယ်။ (ဖတ်ပါ ကျန်းမာရေးလေဖြတ်အကြောင်းကိုသတိပေး ဖိုရမ်အဖွဲ့ဝင်များက။ )
porn နှင့်အစွန်းရောက်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေသည့်နည်းစနစ်နှစ်ခုလုံးသည် desensitization ဖြစ်စေသည်ကိုနားလည်ရန်အရေးကြီးသည် ဦးနှောက်၏ rewiring။ တစ်နည်းပြောရလျှင် ဦး နှောက်သည်ပြbothနာနှစ်ခုလုံးကိုဖြေရှင်းရန်ပြန်လည်ပြင်ဆင်ရန်လိုအပ်သည်။ ကြည့်ပါ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်မှ porn ကိုအသုံးပြုခြင်းသို့မဟုတ် porn / လိင်စွဲလမ်း, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုမှနိမ့်ဦးနှောက်ကို Activation နှင့်အနိမ့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုချိတ်ဆက်လေ့လာရေး။
ငါသည်ပြင်းထန်သောတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေနည်းများဖြင့်စိတ်ရှုပ်ထွေးမှုကိုဖြစ်စေသည့်အရာကိုမသေချာပါ။ ၎င်းသည်လိင်တံအတွင်းရှိအာရုံကြောများအဆုံးသတ်ခြင်း၊ ကျောရိုးရှိဆက်သွယ်မှုများ၊ သို့မဟုတ် ဦး နှောက်ကိုယ်နှိုက်ကလားသို့မဟုတ်အားလုံး ၃ လား။ ကျောရိုးတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်း၌ပါ ၀ င်သူများသည်သူတို့၏တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေသည့်ပုံစံကိုပြောင်းလဲရန်လိုသည်။ အဲဒါရိုးရှင်းပါတယ်
တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေသည့်ပုံစံမည်သို့ပင်ရှိနေပါစေသင်၏ ဦး နှောက်၏သဘာ ၀“ ဤအမှုကိုမရပ်တန့်” ပါစေနှင့်။ အကယ်၍ သင်သည်စိုက်ထူရန်စိတ်ကူးယဉ်ရန်လိုပါကသင့် ဦး နှောက်က“ မဟုတ်ဘူး” ဟုဆိုသည်။ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေရန်အတွက်တစ်စုံတစ်ရာသောလှုံ့ဆော်မှုမျိုးကိုသင်လိုအပ်ပါကသင့် ဦး နှောက်က“ မဟုတ်ဘူး” ဟုဆိုသည်။ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေဖို့အတွက်သင် porn လိုတယ်ဆိုရင်သင့် ဦး နှောက်က "မဟုတ်ဘူး" လို့ပြောတာသေချာပါတယ်။ အကယ်၍ သင်သည်အလွန်အကျွံ porn / masturbation မှ ED ရှိပါကသင့် ဦး နှောက်ကသင့်အား“ STOP!” ဟုဟစ်အော်နေသည်
အကယ်၍ မင်းခြေထောက်ကိုချိုးလိုက်ရင်မင်း ဦး နှောက်က“ လမ်းမလျှောက်နဲ့” ဆိုတဲ့နာကျင်မှုနဲ့အော်ဟစ်မယ်။ သင့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ ဦး နှောက်ရဲ့မက်ဆေ့ခ်ျတွေကိုကျော်လွှားပြီးခြေထောက်ကျိုးနေတဲ့လူတစ်ယောက်ကိုသာလူသားဆန်ခြင်းဖြင့်သာပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုအတင်းဖိအားပေးသောအခါသင်ဤအရာသည်လုပ်နေသည်။ စွမ်းဆောင်ရည်ကိုမြှင့်တင်ရန်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်နှင့် ဦး နှောက်မှပုံမှန်အချက်ပြမှုများကိုလျစ်လျူရှုထားသည်။ ၎င်းသည်ဆက်စပ်နေသော ဦး နှောက်အပြောင်းအလဲများနှင့်ပြည့်စုံသောစွဲလမ်းမှုဖြစ်သည်။
ဘာမျှမ: သင်သုညလိင်စိတ်ကြုံနေရနေကြတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကို, သင်လုပ်နေတာရပါမည်ကိုအတိအကျသင်သည်အဘယ်သို့ပြောပြသည်။ အဘယ်သူမျှမစိတ်ကူးယဉ်မျှတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေမရှိ, porn ။
masturbate ဖို့တိုက်တွန်းနှစ်ခုကနေဖြစ်ပေါ်လာကြောင်းအသိအမှတ်ပြုရန် ကွဲပြားခြားနားတဲ့ သောနေရာများ:
သင့်ရဲ့စွဲလမ်းကြောင်းတစ်အတွေးတစ်ခုသို့မဟုတ် cue ခြင်းဖြင့်အစပျိုးခံရ, ဒါမှမဟုတ်
စစ်မှန်သော libido - သင်အလိုအလျောက်အပြည့်အ ၀ စိုက်ထူနိုင်ပြီး၊ orgasm ရှိရန်အပြင်ဘက်လှုံ့ဆော်မှုသို့မဟုတ်ပုံမှန်မဟုတ်သောတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းဆိုင်ရာနည်းလမ်းများမလိုအပ်ပါ။
ဤနေရာတွင်လူတိုင်းရဲ့ရည်မှန်းချက် 1 ရေတွက်ဖို့အရေအတွက်က2ကနေရွှေ့ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
သတင်းကောင်းကမင်းကိုလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရင်မင်းကယောက်ျားလေးထက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုကြည့်တာနည်းတယ်၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကြည့်ရတာခက်တယ်။ သင်ပိုမိုလျင်မြန်စွာ (သို့မဟုတ်မ) ပြန်လည်ကောင်းမွန်လိမ့်မည် ဒီမှာယောက်ျားတစ်ယောက်ရဲ့ပုံပြင်ပါ
[2 ရက်သတ္တပတ်] ၂၅ နှစ်လုံးလုံးငါ P & Ming ကိုတော်တော်သဘောကျခဲ့တယ်။ ငါမတူညီတဲ့မိန်းမသုံးယောက်နဲ့လိင်ဆက်ဆံဖို့မတတ်နိုင်လို့ဒီ reboot ကိုငါစတင်ခဲ့တယ်။
ငါဟာအထူးကိစ္စအချို့ဖြစ်နိုင်တယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါတကယ် P ပျောက်ဆုံးနေတာတော့မဟုတ်ဘူး။ ၃ ရက်သာကြာပြီးတဲ့နောက်သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကိုကျွန်မလာတွေ့တော့သူမစိတ်လှုပ်ရှားသွားတယ်။ အခုတော့ငါလိင်ဆက်ဆံဖို့မကြိုးစားသေးဘူး၊ ဒါပေမယ့်ငါအရင်ကထက်ပိုပြီးလွယ်လွယ်ကူကူရလာပြီ။ အမျိုးသမီးတွေကနေ့တိုင်းငါ့ကိုပိုပြီးဆွဲဆောင်နေတယ်။ ဘာကြောင့်လဲမသိဘူး တီဗွီမှာညစ်ညမ်းတဲ့မြင်ကွင်းတစ်ခုကိုတွေ့ရတဲ့အခါတိုင်းကျွန်တော့် ဦး နှောက်ထဲကိုဖြတ်သွားတဲ့အသံတချို့ကိုကျွန်တော်ခံစားရတယ်။
P ဟာစိတ်ကူးယဉ်ဆန်ဆန်ပါပဲ၊ ပြီးတော့ခင်ဗျားစိတ်ကူးကြည့်လို့ရတာတွေကိုကြည့်ရတာကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲဒါကိုတွန်းလှန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့ကြည့်လေလေ၊ ပိုမိုကောင်းမွန်သောမြင့်မားသောစိတ်ကျေနပ်မှုရရှိရန် ပို၍ အမှန်တကယ် ပို၍ တွန်းအားဖြစ်စေသည်။ ဒီအသံကအရူးပဲ၊ ငါတို့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့စိတ်တွေကငါတို့ကိုအစောကြီးပိတ်ပြီး preforming မလုပ်ခြင်းအားဖြင့်ငါတို့ကိုကယ်တင်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်လို့ထင်တယ်။ ညစ်ညမ်းမှုကိုအလွန်အကျွံတွက်ချက်ခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ဖန်တီးခဲ့သည်မှာသဘာဝမဟုတ်ပါ။
ခင်ဗျားရဲ့ပစ္စည်းကိရိယာတွေမှန်မှန်ကန်ကန်အလုပ်လုပ်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့နိမိတ်လက္ခဏာကိုခင်ဗျားကနံနက်သစ်သားနဲ့ထလာတဲ့လက္ခဏာပဲ။ မပြည့်စုံပါကအနည်းဆုံးသစ်တဝက်ဖြစ်သည်။ သင်သည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်များသို့မဟုတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်များကိုတွေ့မြင်ပြီးသင်၏ ဦး နှောက်တွင်ရောင်ရမ်းခြင်းများခံစားရသောအခါ၎င်းသည်သင်စတင်နေပြီဖြစ်သည့်ပုံမှန်အဆင့်သို့ပြောင်းလဲသွားခြင်းကိုဆိုလိုသည်။
[3.5 ရက်သတ္တပတ်] ငါဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့မိန်းမတစ်ယောက်နဲ့တွေ့တယ်၊ ငါတို့နှိပ်လိုက်၊ လိုက်ရှာတယ်၊ ယခုအချိန်တွင်ရှိခဲ့သည်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။ ကျွန်တော့်မှာဘာပြသနာမှမရှိခဲ့ဘူး၊ ဒါကြောင့်လည်းမြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့အချိန်ကြာမြင့်စွာအာရုံစိုက်နိုင်ခဲ့လို့အံ့သြသွားတယ်။ မည်သည့်စိုက်ထူခြင်းသို့မဟုတ်ထိုကဲ့သို့သောအရာများမဆုံးရှုံးခဲ့ပါ။ အတွေ့အကြုံကအရမ်းအံ့သြစရာပဲ။ ငါ M နှင့် PI မပါဘဲ preform နိုင်ခဲ့ခြင်းနှင့်ငါ့အလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အဆိုအရအလွန်ကောင်းစွာနိုင်သတိပြုမိ။
ကျွန်ုပ်ရောဂါပျောက်ကင်းပြီးဘာမှမဖြစ်၊ ကျွန်ုပ်စတင်လုပ်ကိုင်ရန်လိုအပ်သည်ကိုသိသော်လည်းဒုတိယအကြိမ်တွင်စတင်ရန်ပိုမိုလွယ်ကူသည်။ ဒီရက်သတ္တပတ်ကအရမ်းမြန်သွားပြီး၊ ငါဟာဘဝကိုပိုပြီးပျော်မွေ့နေတယ်။
ငါဒီမှာကအကြံပေးချက်ကိုလိုက်နာပါကသူကပြောတယ်! ငါပိုကောင်းတဲ့ခံစားချက်ခံစားရုံသာမကဘဲ၊ ငါဟာပိုပြီးစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းပြီးချိုသာတဲ့ခံစားမှုကိုခံစားရတယ်။ ကျွန်ုပ်သည်အမျိုးသမီးများအကြောင်းမည်မျှစိတ်လှုပ်ရှားမိသည်ကိုဖော်ပြရန်နည်းလမ်းမရှိပါ။ ငါပိုပြီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာခံစားရတယ်။ ငါအထက်တန်းကျောင်းကတည်းကငါခံစားခဲ့ရကြပြီမဟုတ်တူသောငါခံစားရတယ်။ ၂ ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်သောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်အမျိုးသမီးများအတွက်စိတ်ဆန္ဒကိုဖြစ်ပေါ်စေသည် “ သူမလှလှလေး!” ရုံတင်မကဘူး အလိုဆန္ဒ, ဒါပေမယ့်ယုံကြည်မှုနှင့်အနည်းငယ် cockiness ။ ဒါဟာစောင့်ဆိုင်းယောက်ျားတွေရကျိုးနပ်သည်။ P&M ကိုတတ်နိုင်သမျှရှောင်ရှားရန်ခုခံနိုင်မှုနှင့်စွမ်းအားတန်ဘိုးရှိသည်။
နောက်ထပ်ဖိုရမ်အဖွဲ့ဝင်တစ်ယောက်၏အတွေ့အကြုံ (heathlystrokes.com မှသူကိုးကားသည်) -
“ စိတ်ထိခိုက်ဖွယ်ရာတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်းရောဂါ (TMS) သည်အချို့သောအမျိုးသားများသည်မျက်နှာ - အောက်ခြေအနေအထားတွင်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေသည့်အကျင့်ဖြစ်သည်။ အချို့သော TMS လေ့ကျင့်သူများသည်မုတ်ဆိတ်မွေး၊ ခေါင်းအုံး၊ သို့မဟုတ်အခြားအိပ်ယာခင်း၊ အချို့သော TMS ဆရာများသည်သူတို့၏အစာအိမ်ကိုအိပ်။ လက်ထဲသို့ထိုးသွင်းကြသည်။
မျက်နှာမှတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသည်လိင်တံကိုအထူးသဖြင့်လိင်တံ၏အခြေခံအပေါ်အလွန်အကျွံဖိအားပေးသည်။ ဤရွေ့ကားအာရုံကိုသမားရိုးကျတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသို့မဟုတ်လိင်ဆက်ဆံခြင်းတို့တွင်အလွယ်တကူပုံတူကူးခြင်းမဟုတ်ပါ။ ဤအရာသည် TMS ဆရာများအားပုံမှန်လိင်ဆက်ဆံမှုကိုမပြုလုပ်နိုင်ပါ။ ဤ ၀ က်ဘ်ဆိုက်အတွက်လေ့လာမှုတစ်ခုအရပုံမှန်အားဖြင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေသည့်အတတ်ပညာရှင်များသည် TMS လေ့ကျင့်သူများထက်လိင် ၆.၆ ဆပိုများကြောင်းတွေ့ရှိရသည်။ ”
တကယ်တော့ဒါဟာအလွန်အန္တရာယ်ရှိပြီးကြာရှည်ခံပြီးနာတာရှည်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ (ED, နောက်ကျအော်ဂဇင်၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်ပျက်စီးမှု) ကျွန်တော်လည်းကျောရိုးကိုတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတတ်လေ့ရှိတယ်၊ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတဲ့အချိန်မှာ PMO ကိုမရပ်တန့်ခင်အထိလက်ကိုတစ်ခါမှမသုံးခဲ့ဘူး။
ထိုသို့နှိုးဆွလမ်းပိုမိုမြင့်မားကြောင်းလိင်တံအပေါ်ထိုကဲ့သို့သောဖိအား, အရှင်ပိုကြီး dopamine မြင့်မားသောထုတ်ပေးသောကွောငျ့ပြည်သူ့ကျရောက်နေတဲ့ masturbate ။ သူကတောင်မူးယစ်ဆေး-ကဲ့သို့အစဉ်အမြဲငါကြုံတွေ့အသက်တာ၌ဘာမှတူသောဒါကောင်းသောခံစားရတယ်။
အဲဒီလိုလုပ်တာ ၅ နှစ်ကြာပြီးတဲ့နောက်ကျွန်မရဲ့လက်နဲ့တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ မဖြစ်နိုင်ဘူး ငါရေချိုးခန်းထဲမှာရပ်5မိနစ်အပြီးအရှုံးပေး။ ငါကအကြောင်းစိတ်ဓာတ်ကျပေမယ့်ဘယ်တော့မှမစဉ်းစားပါ, ကအကြောင်းကိုခဲ့သဲလွန်စမရှိဘူး။
ယောက်ျား ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းကျော်သည်မိမိကိုယ်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းဖြင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတတ်အောင်သင်ယူတတ်မြောက်ကြသည်။ TMS ကိုကျင့်သုံးသောအမျိုးသားများကံမကောင်းတာကပုံမှန်မဟုတ်တဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုပါ။ အခြားလူများထံမှတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတတ်အောင်လေ့ကျင့်သောယောက်ျားများသည်၎င်းကိုသမားရိုးကျနည်းဖြင့်ပြုလုပ်ရန်သင်ယူသည်။ (သူတို့ကိုယ်တိုင်ရှာဖွေတွေ့ရှိသူအမျိုးသားအများစုသည်လည်းသမားရိုးကျနည်းလမ်းကိုရှာဖွေတွေ့ရှိသည်။ ) "
တကယ်တော့ဒါဟာပိုပြီးရှုပ်ထွေးတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ ကျရောက်သောကျောရိုးကိုတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသည် ပို၍ အကျိုးဖြစ်ထွန်းသောကြောင့်အကျိုးအမြတ်နိမ့်ကျသည့်ဘဝရှိသည့်စိတ်ဓာတ်ကျသူများသည်ကျရောက်သောတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုကြိုးစားရန်သွေးဆောင်ခံရနိုင်သည်။ ဒါပေမယ့်ငါသေချာမသိဘူး…
ဒါပေမဲ့မှားယွင်းတဲ့လမ်းကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တဲ့အတွက်တခြားဘာမှမသိခဲ့ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့လူအများစုကသူတို့ရဲ့လက်နဲ့တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတာကိုသဘောပေါက်လာတဲ့အခါအဲဒါကိုအကျိုးမပေးနိုင်တဲ့အတွက်ငါမကြိုက်ဘူး၊ အိပ်ရာပေါ်မှာလဲလျောင်းနေမှသာငါစိတ်ကူးယဉ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။
4-5 လအကြာအလွန်အကျွံတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်းမရှိဘဲငါဂုဏ်ယူစွာငါညင်ညင်သာသာ, ငါ့လက်နှင့် masturbate ငါ့နိုင်စွမ်းပြန်ကြေညာခြင်းနှင့်ပင်ကူးယဉျမပါဘဲနှင့်အကောင်းတစ်ဦး, အထူးကြပ်မတ်အော်ဂဇင်ရှိနိုင်ပါသည်။ 🙂သာလျှင်ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်ကသို့ကြီးမားတဲ့ခြားနားချက်ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။
ငါဒီမှာခဏတာမလာသေးဘူး၊ ငါပျောက်ကင်းသွားပြီဆိုတာငါသိစေချင်တယ်၊ ငါလည်းအသက် ၃၆ နှစ်ရှိပြီဖြစ်လို့ငယ်ငယ်လေးကတည်းကတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတတ်တယ်။ ဖတ်ပါ Doidge စာအုပ်; ၎င်းသည် neuroplasticity အတွက်အလွန်ကောင်းမွန်သော primer တစ်ခုဖြစ်သည်။ သငျသညျဤသဘောကျမည်မဟုတ်ပါဒါပေမယ့်ငါကကိုယ့်ကိုကိုယ်ကုသပျောက်ကွယ်သွားဖို့ဘယ်လောက်ရက်ပေါင်းမည်မျှစိတ်ကူးရှိသည်မဟုတ်။ ငါခဏအကြံဥာဏ်ယူပြီးနေ့ရက်များကိုရေတွက်ရန်မဆုံးဖြတ်တော့ပါ။ အကယ်၍“ ရက်များ” ကိုတိုင်းတာသည့်တုတ်ကဲ့သို့အသုံးပြုလိုပါကကြီးမြတ်သည်။ ငါ့အဘို့, တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုရပ်တန့်ပြီးအွန်လိုင်းပေါ်မှအမျိုးသမီးပုံများကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်လေ့ကျင့်ခန်းများနှင့်တွေးတောဆင်ခြင်မှုများပြုလုပ်ခဲ့သည်။ TMS ဆိုတာခွေးပဲ၊ အဲဒါဟာပြန်လည်ထူထောင်ဖို့အတွက်ပိုပြီးခက်ခဲအောင်လုပ်နိုင်တယ်၊ ဒါပေမဲ့အဲဒါကိုလုပ်နိုင်တယ်။ အခုအချိန်မှာ ED ပြissuesနာမရှိဘူး။ ကံကောင်းပါစေ၊
အလေးအနက်ထား, ငါလုပ်ခဲ့တယ်ငါရှိသည် ... ငါ 11 ဝန်းကျင်မှ 14 ပတ်ပတ်လည်ကျရောက်နေတဲ့တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေပြီးနောက်သေခြင်းချုပ်ကိုင်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေဖို့ပါရမီ switch ကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ ငါဖြစ်စေ PIED ကြောင့်ထမရနိုင်ခြင်းသို့မဟုတ်ကျရောက်နေတဲ့, သေခြင်းချုပ်ကိုင် combo ဘာမှမခံစားရနိုင်သည့်ကိစ္စရပ်များအများကြီးရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒီနေ့ငါပြန်ကောင်းလာပြီ တစ်နှစ်လောက်ကြာအောင် Hard Mode ကို ၆၀+ ကျော်တစ်နှစ်လောက်ကြာအောင်လုပ်နိုင်ခဲ့တယ်။
အခြေခံအားဖြင့်ကျရောက်နေတဲ့နှင့်သေခြင်းချုပ်ကိုင်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေနှင့်အတူပြဿနာကိုသငျသညျ (PIED ၏ဖြစ်ရပ်နှင့်အတူအတိုင်း software ကိုနှိုင်းယှဉ်) သင့်ဟာ့ဒ်ဝဲ desensitize သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ ဒါကြောင့်သင်မှန်, သင့် sensitivity ကိုပြန်လည်သို့မဟုတ်ဖြစ်နိုင်ရင်မူလအဆင့်အတန်းက reboot လုပ်ဖို့လိုသလား?
ကျန်းမာသန်စွမ်းသောအရာကအကြံပြုသည်မှာပုံမှန်ပုံမှန်ပွတ်တိုက်မှုကိုအပြုသဘောပြန်ဖြစ်ရန်သာမန်အားဖြင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုပြုလုပ်ရန်ဖြစ်သည်။ ငါနှင့်အတူပြproblemsနာနှစ်ခုရှိသည်။ ၁ ။ ။ ) ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ပြီးဝါသနာပါလျှင်ပုံမှန်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသည်ထိုအရာအတွက်ထူးဆန်းသောရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ NEW FLASH၊ ပုံမှန်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသည်လိင်အင်္ဂါနှင့်မတူပါ။
လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းနှင့်သေစေနိုင်သည့်အပျိုစင်အပျိုစင်များကိုသူတို့၏ဘ ၀ ၏အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအတွက်ကျွန်ုပ်အကြံပေးလိုသည်မှာရက်ပေါင်း ၉၀ Hard Mode NoFap ၏စိန်ခေါ်မှုကိုပြန်လည်ခံစားရရန်နှင့်သင်သည်စစ်မှန်သောအမျိုးသမီးတစ် ဦး နှင့်အဆင်မပြေလျှင်မခံစားရလျှင် မည်သည့်အကြောင်းကြောင့်ပင်လက်ဖြင့်မပြုလုပ်ပါနှင့်၊ vanilla textured fleshlight ဖြင့်ပြုလုပ်ပါ။ ငါဟာပုံမှန်လိင်အင်္ဂါယောကျာ်းထက်သင့်ရဲ့လိင်တံကိုလှုံ့ဆော်ပေးနိုင်တဲ့အမျှင်ဓာတ်တွေရှိတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သင်ဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုသတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်းအတာအထိပြန်လျှော့ချစေတယ်။
အဘယ်ကြောင့်ဇာတိပကတိအလင်းကိုကျွန်ုပ်အကြံပြုသနည်း။ - ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သင်ဟာဒုတိယအကောင်းဆုံးအစားထိုး - ဇာတိပကတိအလင်းအစားထိုးနည်းနဲ့လေ့ကျင့်တာထက်သင်ဟာဘာအကြောင်းကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်လိင်အင်္ဂါကိုစစ်အောင်မလုပ်နိုင်လို့ပါ။
ကိုယ့်အကြောင်းကိုယ်ပြောရင်ပြန်ကောင်းလာမယ်လို့ပြောရင်ငါလုံးဝပြန်ကောင်းလာမယ်။ ကွန်ဒုံးက TMS ရှိသူတစ်ယောက်အတွက်ပြaနာဖြစ်သင့်တယ်လို့မင်းပြောဖူးတယ်။ ငါကွန်ဒုံးနဲ့အလွယ်တကူအော်ဂင်စလုပ်နိုင်တယ်။ အခြေခံအားဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်၏လိင်တံသည်အမျိုးသမီးတစ် ဦး အပေါ်အလွန်အမင်းထိခိုက်လွယ်သည်။ မင်းအတွက်အရမ်းလက်တွေ့ကျတဲ့မျှော်လင့်ချက်ရှိတယ်လို့ငါယုံကြည်တယ်
PS အကယ်၍ သင်သည်အမြဲတမ်းတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ FORGET ကိုပြန်လည်ရယူလိုပါက။ ၎င်းသည်အန္တရာယ်ရှိပြီးပြန်လည်လုပ်ဆောင်ရန်ခက်ခဲလေလေပြန်လည်ထူထောင်ရန်ခက်ခဲလေလေဖြစ်သည်။
အသက် ၂၅ - တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်း - ပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းနှင့်ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်း
အသက် ၂၆ - Porn သွေးဆောင် ED သည် ၂၇၉ ရက်အတွင်းကျွန်ုပ်၏ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းကိုကုသပေးခဲ့သည်။ “ ကြီးပြင်းလာတာနဲ့အမျှဒစ်ဖြင့်ပွတ်သပ်ခြင်းဖြင့်လဲလျောင်းနေတဲ့မွေ့ရာပေါ်ကနေအမြဲတမ်းတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေနိုင်ခဲ့တယ်။ ငါလည်းသင်ယူဖို့အတွက် AWFUL ပဲ။ ”
အဆင်ပြေတယ်! အဘယ်သူမျှမညစ်ညမ်းနှင့်မျှမ FAP ၏ 35-ish ရက်, အဓိကရလဒ်များကို!
ငါထင်တာကတော့အမျိုးသမီးသေခြင်းချုပ်နှောင်ခြင်းနှင့်ညစ်ညမ်းမှုကိုထိန်းချုပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ အခြေခံအားဖြင့်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်အတွင်းမှာအရာရာပြောင်းလဲသွားတယ်၊ ငါထွက်သွားဖို့ငါကိုယ်တိုင်တစ်ကိုယ်ရည်ရာဂစိတ်ဖြေသည့်နည်းနဲ့များသောအားဖြင့်ညစ်ညမ်းမှုကိုသုံးဖို့လိုတယ်။ ဤအချိန်အတွင်းကျွန်ုပ်သည်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောကောင်လေးတစ်ယောက်နှင့်စတင်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးသူကိုယ်တိုင်မပြုခဲ့လျှင်သူနှင့်အော်ဂဇင်မရရှိနိုင်ကြောင်းကျွန်ုပ်စိတ်ပျက်မိကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။
လွန်ခဲ့သောတစ်လခန့်ကပင်ရက်ပေါင်း ၃၀ မျှ fap မရှိ၊ ယခုတွင်ငါသည်ငါ့ရည်းစားထံမှအော်ဂဇင်ရှိခြင်းမှပြန်လာပြီ။ ၎င်းသည်လုံးဝတသမတ်တည်းမရှိသေးသော်လည်းတိုးတက်မှုမှာကြီးမားသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊
သင့် ဦး နှောက် On Porn မှအကြံဥာဏ်အချို့ကိုကျွန်တော်အထူးတွေ့ရှိခဲ့တယ်။ ငါရည်းစားနှင့်လိင်ဆက်ဆံစဉ်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုမစဉ်းစားရန်ဖြစ်သည်။ ဒါက porn ကိုပတ်ပတ်လည်အေးအေးဆေးဆေးဖြစ်အောင်ကူညီနိုင်တယ်လို့ထင်တယ်။ တကယ်တော့, ငါ (porn မပါဘဲ) တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုထပ်စမ်းသပ်နှင့်ငါ့ရည်းစားနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏လိင်အကြောင်းကိုစဉ်းစားရုံမှပယ်ရှားရန်လွယ်ကူရှာပါ။ ကောင်းလိုက်တာ!
healthstrokes.com ၏ရေးသားသူသည်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်လျှင်ပင်သူသည်ထိုအပြုအမူကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်ကူညီလိုသူ၊ သူသည်အပြစ်ကင်းသောမိုက်မဲသောသူဖြစ်သည်။ အဲဒီလို့ဘာဖြစ်လို့? ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူက 'ရုပ်မြင်သင်ထောက်ကူပစ္စည်းများ' ဟာပြaနာမရှိဘူးလို့ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းကြေငြာခဲ့တယ်။ သူ့အမြင်ကတော့ညစ်ညမ်းမှုဟာအန္တရာယ်မကင်းဘူး၊ ပုံမှန်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသည်ကမ္ဘာပေါ်မှာကျန်းမာရေးအရှိဆုံးလို့သူကထင်မြင်ချက်ပေးတယ်။ သူကစွဲလမ်းမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ ဦး နှောက်ပြောင်းလဲမှုကိုနားမလည်ဘူး။
ငါထင်တာကဒီဟာကစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စရာအကောင်းဆုံးလို့ထင်တယ်။ ဒါဟာအကောင်းဆုံးမှာအခြား ဦး တည်ချက်အတွက်ပြောင်းလဲလိမ့်မယ်။ လူတွေကို healthstrokes.com အကြောင်းပြောပြတာကောင်းတယ်။ ဒါပေမဲ့ဒီ site မှာပေးထားတဲ့ဖြေရှင်းချက်ကလူတွေကိုဒုက္ခရောက်နေတဲ့ထောင်ချောက်ထဲရောက်အောင်ပို့ဆောင်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတာကိုသင်တကယ်စဉ်းစားသင့်တယ်။ ငါဖြစ်ပျက်သောအရာဟူမူကား၊
Yourbrainonporn.com ကကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်သည်စွဲလမ်းသူတစ်ယောက်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောဘဝကိုရရှိရန်အတွက်ဤစွဲလမ်းမှုကိုရပ်တန့်ရန်ကျွန်ုပ်အားသင်ကြားပေးခဲ့သည်။ အဖြေ - PMO မဆိုအအေးကြက်ဆင်ကိုဖြတ်ပစ်ပါ။ Healthystrokes.com သည်ယောက်ျားများကိုတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်း၏ပြaboutနာများအကြောင်းသင်ကြားပေးသည်၊ သူတို့ကလုံးဝစွဲလမ်းစေခြင်းငှါအရိပ်အမြွက်မဟုတ်ပါဘူး။
စာရေးသူ၏ဖြေရှင်းချက် - တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုရပ်တန့်ပါ၊ ပုံမှန်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုစတင်ပါ။ သင်မလုပ်နိုင်ပါကတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုတစ်ပတ်သို့မဟုတ်အနည်းငယ်မျှကြာအောင်ရပ်တန့်ပါ၊ ၎င်းကိုပုံမှန်နည်းလမ်းဖြင့်စမ်းကြည့်ပါ။ မအောင်မြင်ဘူးလား ထပ်မံစတင်ပါ။ ဒီတော့တ ဦး တည်းအကြိမ်ကြိမ်ဆုတ်ခွာဖြတ်သန်းသွားတယ်။
သင့် ဦး နှောက်တွင် ဦး နှောက်မှထောက်ပံ့သောအရာသည်မှန်မလားကျွန်ုပ်တွေးနေမိသည်။ ဒါဟာအများကြီးသဘာဝကျပါတယ်; ဒါကြောင့်ရိုးရှင်းစွာအလုပ်လုပ်ရန်ရှိပါတယ်။ နောက်တစ်ခါထပ်ပြောရရင် healthstrokes ကဒီ dude ကလုံးဝမှန်တယ်၊ ငါကတစ်ကိုယ်ရည်ရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုပြန်လည်လေ့ကျင့်ဖို့လိုတယ်။ ငါ ၅၀ ရာနှုန်းသာစိုက်ထူနေစဉ်ငါလူရှုပ်ရန်လိုမည်ဆိုလျှင်မည်သူကဂရုစိုက်မည်နည်း။ အချိန်မီပိုကောင်းပါလိမ့်မယ် မှား မထားဘူး ထို့အပြင်၎င်းသည်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းနှင့်အဆုံးစွန်ခြင်းဖြင့်အဆုံးသတ်သည်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအကြိမ်ပေါင်းများစွာအဲဒီမှာခဲ့။
သူကပြောပါတယ်, အခြို့ယောက်ျားတွေဒုက္ခ TMS မှပြန်လည်ထူထောင်အများကြီးရှိသည်။